Zoo Photos on iPhone aka ma ọ bụ Jiri Top 5 égwu
Na biakwa obibia nke nkà na ụzụ, ndị iPhone ọrụ nwere ike ugbu a na-ha ọdịnaya ekwentị na-echebe mgbe niile. Eburu n'uche nzuzo ndị ọrụ mkpa, na ụlọ ọrụ nwere ulo oru ọtụtụ iPhone ngwa na ike ga-eji na-onwe data nzuzo.
Ndị a ngwa ọdịnala, nnoo na-agbakwụnye ihe mmezi oyi akwa nke nchebe na iPhone ma hụ na ihe ọmụma ndị na-pụtara na-nzuzo n'ezie-anọgide na-echebe. E nwere ọtụtụ ụzọ nke-ezo foto na iPhone na ma ọ bụ na-enweghị na iji ngwa. I nwere ike ịgbalị ha niile ma bulie onye na-amasị gị ndị kasị.
Part 1. Olee Iji aka Zoo Photos on iPhone
Part 2. 5 Best iPhone égwu Zoo Photos
Part 1. Olee Iji aka Zoo Photos on iPhone- 'n'Ubi' Images
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji zere hassle nke Iṅomi na-azọpụta foto na iji ihe ọ bụla ọzọ ngwa ma ọ bụ na-eche na ị gaghị enwe ike ka na-echeta paswọọdụ setịpụrụ maka ihe ọ bụla ngwa, n'okpuru kwuru bụ ụzọ kacha mfe n'ihi na ị na-azọpụta ndị photos nri n'ime gị iPhone.
Nzọụkwụ 1: Gaa Photo Album gị iPhone na pịa-emeghe ma na-ahụ photos n'ime. Ọzọ, họrọ oyiyi ahụ ị ga-achọ zoo.
Nzọụkwụ 2: Pịa Dezie> n'Ubi iji belata ma ọ bụ ubi mbụ oyiyi.
Nzọụkwụ 3: Ị ga-achọpụta na ịṅụ na nkuku nke igbe. Ịdọrọ na belata ya, nke mere na ọ bụ nanị na-egosi a nnọọ obere nke ebe foto. Pịa 'Save' ịzọpụta cropped bọtịnụ.
Mgbe cropped image na-echekwa, onye ọ bụla na-eme nchọgharị ekwentị ga-ahụ naanị otu akụkụ nke foto, ma ha agaghị enwe ike ịhụ zuru ezu oyiyi.
Cheta na: Iji biaghachi na cropped image na mbụ size ma ọ bụ na-ele dum foto, pịa imeghe foto, pịa Dezie> '-aghọ Original'.
Ọtụtụ iPhone ngwa ọdịnala na-na-enye, ikwe ka ọrụ ka ha na photos zoro n'ime ekwentị. N'okpuru ebe e kwuru nwere n'etiti ndị kasị ewu ewu na iPhone ngwa na ike ga-eji na-gị photos zoro:
1) Private Photo volt
Nke a bụ otu nke kasị mma na nke kasị onwe foto ngwa ọdịnala na-arụ ọrụ ịtụnanya maka iPhone na iPad. Ọ na-achọ a paswọọdụ iji nweta ke Photo volt site na iji kọmputa ede na passcode.
The ngwa na-akwado ma ntụpọ mkpọchi na paswọọdụ mkpọchi. Ọ na-enyere ndị ọrụ igbachi na jikwaa foto na ị chọrọ ịnọgide na nzuzo ma ọ bụ na nzuzo. N'okpuru ebe kwuru banyere ha bụ nzọụkwụ iji nweta ya.
Nzọụkwụ 1: Họrọ foto na ị chọrọ zoo. Nzọụkwụ 2: Mgbe ogologo-ejide foto, ọ ga-akwụsị ma na-aga 'n'onwe' nchekwa n'ime Photo volt.
Ugbu a, ọ bụrụ na mmadụ na-ele igwefoto nchekwa foto ga ọgaghị adị dị ka ya na-ezo.
Cheta na: Iji mee ka foto azụ ma ọ bụ mee ka ọ ọha ọzọ, na-aga Photo volt site na iji kọmputa ede na passcode, na-aga Private nchekwa na ogologo pịa foto na ị chọrọ ka ọha na eze.
Rating: 4+ Ahịa: Free
2) My Nzuzo nchekwa
My Nzuzo nchekwa bụ oké ngwa na pụrụ inyere gị aka na-gị nwere dị ka photos onwe site ekwe ka ị na tinye a passcode. Ngwa ga-eji na-azọpụta ozi ọ bụla dị ka photos, kọntaktị, ndetu, videos, mkpachị, songs na ọbụna na fim.
Ngwa nakwa awade ọzọ mma site na ime ka ị mara ma mmadụ chọọ iji nweta gị onwe photos ma biri elu-abanye na-ezighị ezi passcode. The ngwa ga-ejikwa ha na foto ma zọpụta na ekwentị gị ka ị mara banyere ihe a merenụ. Jụụ, ọ bụghị ya?
Nzọụkwụ 1: Nbanye 'My Nzuzo nchekwa' site na iji passcode. Nzọụkwụ 2: Site n'ebe nweta gị iPhone foto album iji họrọ foto ị chọrọ mbubata ka nzuzo nchekwa. Pịa họrọ foto na ọ ga-akpali gị Nzuzo nchekwa.
The photos kpaliri otú a ga-ọgaghị adị ikiri site onye ọ bụla.
Na-Nchekwa bụ a free ngwa na-enye ohere iPhone ọrụ zoo ha foto site na mgbe ụfọdụ ukporo nchọgharị nke ha na ekwentị. Ọ bụ ọzọ a oké ngwa nke na-adịghị ekwe ka ịnweta gị zoro ezo photos site na iji 4 PIN ọnụọgụ ma ọ bụ paswọọdụ.
Na-Nchekwa nwekwara nwere atụmatụ maka ewere photos site na iji ngwa, ọ bụrụ na onye ọrụ na-ezube kpọmkwem ịkpali foto na-Nchekwa. A na ngwa na-abịa na a onwe igwefoto, otú i nwere ike na-a foto na iji Nọgidenụ Nchekwa na ngwa na ịzọpụta foto ogologo n'ime ngwa. Otú a Ọ na-azọpụta mgbalị na oge nọrọ na-akpụ akpụ na foto site na ihe iPhone igwefoto mpịakọta ka Nọgidenụ Nchekwa maka ezo ha.
Nzọụkwụ 1: logon ka Nọgidenụ Nchekwa na iji gị nchebe ntụtụ. Nzọụkwụ 2: Kpebie na họrọ photos ị chọrọ zoo. Nzọụkwụ 3: Pịa 'Zoo' na photos ga-ezo si igwefoto nchekwa.
Rịba ama: Iji Unhide photos, pịa 'Unhide' na ala nke interface.
SpyCalc-enye ohere ịchekwa ihe oyiyi ma ọ bụ foto n'okpuru a oyi akwa nke a dị mfe achọ mgbako. Dị ka aha-atụ aro, SpyCalc bụ a ọtọ mgbako. Ma ngwa egosiputa photos nanị mgbe onye ọrụ abatakwa ziri ezi paswọọdụ.
Mgbe ọ na-enye ohere photos ịbụ onye a kpaliri a ngwa si Photolibrary, SpyCalc na-enye ohere categorizing na ndokwa foto eme ka search mfe.
Nzọụkwụ 1: Download SpyCalc gị iPhone. Nzọụkwụ 2: Gaa SpyCalc 'Ntọala' na-atụgharị na weebụsaịtị nhọrọ. Nzọụkwụ 3: Iji a nchọgharị, abanye n'ime iPhone. Nzọụkwụ 4: Ọzọ, ị nwere ike 'Họrọ Files' na bulite ya ma ọ bụ 'Dọrọ na dobe' faịlụ bulite n'ime SpyCalc.
Ọzọ ụzọ dị mfe nke na-ezo foto gị na kpochidoro ha na okwuntughe bụ site na iji Dropbox. N'okpuru ebe e kwuru okwu bụ iji mezuo nke a:
Nzọụkwụ 1: Kpebie na họrọ foto na ị ga-achọ iji chebe ma ọ bụ zoo. Nzọụkwụ 2: Bugharịa họrọ foto site na ngwa igwefoto ka Dropbox. Nzọụkwụ 3: Next, họrọ ịgbakwunye a 4 ọbula paswọọdụ / passcode ime ka Dropbox ngwa paswọọdụ echebe.
Photos zoro iji usoro a na-apụghị meghere enweghị na-eji nri paswọọdụ, si otú eme ka gị na photos zoro na nchebe.
Na n'elu kwuru banyere ụzọ, ugbu a iPhone ọrụ nwere ike zuru ike na obi ike, na photos na iPhone ga-anọgide na-ezo na-agaghị abụ dị ka ndị ọzọ n'ihi na ị na-elele ọbụna bụrụ na nke mberede njikwa na-eme nchọgharị na ekwentị.
> Resource> iPhone> Olee Zoo Photos on iPhone